iPad Pro - iPhone News | IPhone News (Pejy 2)
Ny fampiharana Procreate dia nohavaozina mba hahafahan'ny mpampiasa iPad Pro 2021 mahazo tombony betsaka amin'ny fitaovany amin'ny M1.
Ny iPad Pro vaovao misy processeur M1 vaovao dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa izay mahatonga azy ho takelaka "Pro" izay ...
Ny rindrambaiko fiantsoana horonantsary zoom ankehitriny dia manohana ny famolavolana afovoany iPad Pro 2021
Ny endri-javatra Centered Framing izay tonga miaraka amin'ny iPad Pro 2021 dia mifanaraka amin'ny fanavaozana farany ny fampiharana Zoom
Azo alaina amin'ny iPad izao ny fampiharana sary Halide
Ny rindranasa Halide iPhone dia navaozina ary farany mifanaraka amin'ny iPad miaraka amina interface efa nohavaozina tanteraka
Vidio ny 1 iPad iPad Pro anao nohavaozina miaraka amin'ny Wi-Fi + Cellular miloko volondavenona ao amin'ny Apple miaraka amin'ny fihenam-bidy 400 euro
Apple dia efa manana ny faritra misy azy amin'ny iPad Pro andiany fahatelo miaraka amin'ny vidiny mahaliana
Apple dia nampiditra fampiasa iray andrasan'ny mpampiasa tokoa mba hahafahany manavao ny OS misy azy na inona na inona tambajotra misy.
Tonga anio ny iPad Pro, 24 ″ iMac ary Apple TV 4K vaovao
Androany ny iPad Pro vaovao manomboka amin'ny 2021, ny iMac 24-inch vaovao ary ny Apple TV 4K vaovao dia tonga amin'ny tompony
Ity no keyboard vaovao fotsy an'ny iPad Pro 2021
Mampiseho horonantsary iray izay ahitanao ny klavian'ny iPad Pro 2021 fotsy. Ny Magic Keyboard dia mandray an'io loko tsara tarehy io
Ny mpampiasa sasany dia miaina fiovana amin'ny kamiao amin'ny fandefasana ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1
Ny Kensington StudioDock dia tsy mifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao 12,9-inch
Ny iPad Pro 12,9-inch vaovao misy efijery miniLED dia tsy mifanaraka amin'ny Kensington StudioDock koa noho ny hateviny fanampiny.
Ny tranga fitendry Logitech Combo Touch misy trackpad dia azo natokana ho an'ny iPad Pro 2021 vaovao
Ilay orinasa malaza amin'ny fito ora ary efa manana ny katalaoginy hamandrihana ny Logitech Combo Touch vaovao ho an'ny iPad Pro 12,9 "manomboka amin'ny 2021
Ny fandefasana ireo mpampiasa iPad Pro 12,9-inch vaovao dia tombanana amin'ny tapany faharoa amin'ny volana Jona
Apple dia nilaza fa ny iPad Pro 12,9-inch vaovao dia miasa miaraka amin'ny Magic Keyboard teo aloha na dia tsy hanidy tsara aza
Nanamafy i Apple fa ny Magic Keyboard voalohany dia mifanaraka amin'ny iPad Pro 12,9-inch 5ème generasi XNUMX, na dia tsy mihidy tsara aza.
Tamin'ny fanombohana ny iPad Pro miaraka amin'ny chip M1, nipoitra indray ny tsaho fa mikasa ny hanakambana azy amin'ny Mac i Apple.
Satechi mijoro amin'ny iPad, tena ilaina
Notsapainay ny fijanonan'ny aliminioma Satechi an'ny iPad iPad, izay azo antoka fa tsy maintsy ananan'ny olona manana tablette Apple.
Apple dia nanitatra ny gamut loko an'ny Magic Keyboard tamin'ny fampidirana fotsy hanampiana ilay mainty tany am-boalohany.
«Misiona tsy mampino» ny fahatongavan'ilay puce M1 amin'ny iPad Pro
"Incredible Mission" no lohatenin'ny doka ho an'ny maodely iPad Pro vaovao natombok'i Apple omaly tolakandro
IPad Pro tena nohavaozina no nambara. Lazainay aminao ny vaovao rehetra ampidirin'ny fitaovana Apple vaovao.
Araho mivantana amin'ny iPhone News ny hetsika Apple
Araho mivantana ao amin'ny fantsinay YouTube ny hetsika "Spring Loaded" an'i Apple, ary omeo hevitra ny resaka mivantana.
Apple Pencil nohavaoina azo aseho mandritra ny hetsika ny talata 20 aprily ho avy izao
Nilaza i Gurman fa tsy hamoaka zavatra "manavao loatra" i Apple amin'ny 20 aprily
Araka ny voalazan'i Mark Gurman, dia hanana fanovana vitsivitsy na fanitsakitsahana kely amin'ny laharana iPad Pro isika amin'ny talata.
Raha ny fampitam-baovao Bloomberg malaza dia ny tsy fahampian'ny singa sy ny iPad Pro mihitsy no hanamarika ny fandefasana azy amin'ity volana aprily ity
Notsapainay ny Case MagEZ an'i Pitaka ho an'ny iPad Pro, izay miaro ny takelaka Apple anao raha mbola mamela anao hampiasa ny Magic Keyboard
Nisy tsaho vaovao tonga taminay momba ny daty famoahana ny iPad Pro 12,9-inch miaraka amin'ny fisehoana mini-LED. Lazainay aminao.
Gurman dia miantoka fa ny iPad Pro vaovao misy efijery miniLED, Thunderbolt ary A14X processeur dia ho tonga amin'ny volana aprily.
Fanambarana vaovao momba ny AirPods Pro manamafy fa ny taranaka faharoa amin'ity fitaovana ity dia mbola lavitra ny mahatratra ny tsena.
Ny bitsika iray avy amin'i Jon Prosser indray dia mampiseho ireo vokatra mety ho hitantsika amin'ity volana martsa ity ary indrindra amin'ny 23.
Ny porofo vaovao momba ny iPad Pro misy efijery mini-LED dia mazava
Araka ny tatitra vaovao iray, ireo mpamatsy fampisehoana mini-LED dia manomana famokarana atsy ho atsy mikendry an'i Apple sy ny iPad Pro.
IPad Pro mihazakazaka macOS Catalina
Ny virtualization ny fitaovana dia mitarika fampisehoana ny fiasan'ny macOS Catalina ao amin'ny iPad Pro an'ny 2020
Ny 12,9 ″ iPad Pro miaraka amin'ny fampisehoana Mini-LED amin'ny volana martsa
Ny efijery mini-LED dia miseho indray eo amin'ny tsaho momba ny iPad Pro vaovao izay havoaka amin'ny volana martsa
Ugreen X-Kit, mijoroa ary USB-C HUB hitondrana na aiza na aiza
Ny Ugreen X-Kit stand dia manambatra fijoroana ho an'ny laptop na takelaka misy HUB izay misy fifandraisana dimy
Ny iPad vaovao 2021 ho an'ny Q1 ary misy efijery mini-LED
Ny fampisehoana Mini-LED dia mety hahatratra ny iPad 12,9-inch sy MacBook Pros miorina M1 hatramin'ny martsa 2021
Ny iPad Pro dia afaka mampihatra fampisehoana OLED amin'ny taona ho avy
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny karazana efijery amin'ny iPad Pro manaraka dia manome sosokevitra fa ho avy izy io miaraka amin'ny efijery mini-LED sy OLED amin'ny 2021
Apple dia manomboka mampiditra ny charger 20W ao amin'ny iPad Pro
Ny iPad Pro dia manomboka mitondra ao anatin'ny charger 20W mifanaraka amin'ny fenitra famenoana MagSafe an'ny iPhone 12.
Ny fangatahana avo lenta ho an'ny iPhone 12 Pro dia nahatonga an'i Apple hanova ny rojom-panolorany sy hamindra ny ampahany hamaly ny fangatahana.
IPad Pro miaraka amin'ny efijery Mini-LED dia halefa amin'ny telovolana voalohany 2021
IPad Pro miaraka amin'ny efijery Mini-LED no halefa amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2021. LG mpamokatra tontonana LG dia hanomboka hamokatra vetivety.
Word, Excel, ary PowerPoint izao dia mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny trackpad amin'ny iPadOS
Ny rindranasa Office mifototra amin'ny famokarana dia nohavaozina mba hahazoana fanohanana amin'ny tohatra iPadOS
Ahoana ny fandrefesana ny haavon'ny olona amin'ny scanner LiDAR amin'ny iPhones sy iPads
Ny iPad Pro sy iPhone 12 vaovao dia mitondra ny scanner LiDAR afaka manao hetsika toy ny fandrefesana olona, ​​fantatrao ve ny fomba?
Fanadihadiana fitendry Brydge iPad: mahatalanjona fotsiny
Ny kitendry Brydge ho an'ny iPad dia manome fanoratana tsara ho antsika amin'ny akora voalohany ary vita amin'ny vidiny tena lafo
Ny processeur A14X dia ho tafiditra ao amin'ny iPad Pro vaovao sy ny Mac Apple Silicon teo am-piandohana
Apple dia efa vonona ny mpikirakira A14X vaovao izay hampidiriny ao amin'ny iPad Pro vaovao sy amin'ny Mac voalohany miaraka amina processeur ARM
Roa ambin'ny folo atsimo mandefa ny tranga BookBook malaza ho an'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny Magic Keyboard
Akanjo ny iPad anao amin'ny fomba fanao miaraka amin'ny tranga malaza roa ambin'ny folo BookBook atsimo izay mijoro miaraka amin'ny iPad Pro sy Magic Keyboard.
Logitech's Folio Touch, kitendry misy trackpad ho an'ny iPad Pro 11-inch misy izao
Ny tranga misy ny trackpad ho an'ny Logitech iPad Pro dia azo alaina any Espana izao amin'ny vidiny 159,95 euro, safidy mahaliana an'ny Apple's Magic Keyboard.
UGREEN Hub USB-C, dock mora azo antoka ho an'ny MacBook na iPad Pro
Notsapainay ny UGREEN USB-C Hub izay manome anay fifandraisana ilaina maro ho an'ny MacBook na iPad Pro amin'ny vidiny ambany dia ambany.
iPadOS 14: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Raha tsy nahatratra ny WWDC 2020 ianao ary tsy fantatrao ny vaovao rehetra izay ho tonga avy amin'ny tanan'ny iPadOS 14, amin'ity lahatsoratra ity dia manome hevitra momba azy tsirairay izahay.
IPad Pro vaovao misy chip miniLED, A14X ary 5G amin'ny fiandohan'ny 2021
Tsaho iray navoakan'i Lovetodream dia miresaka momba ny iPad Pro tamin'ny fiandohan'ny 2021 miaraka amin'ny fifandraisana 5G, ny chip A14X ary ny efijery miniLED
Apple Pencil mainty dia mety ho avy amin'ny tanan'ny iPad Pro vaovao
Ny taranaka iPad Pro manaraka dia mety miaraka amin'ny Apple Pencil vaovao amin'ny mainty, ankoatry ny fotsy fotsy avy any Apple.
Ny Magic Keyboard dia mety hanana lavaka amin'ny ampahany amin'ny savily hitehirizana tsara ny Apple Pencil araka ny hitantsika amin'ity patanty ity
Apple patanty dia manambara ny kitendry iPad misy bokotra miasa mora tohina amin'ny tsindry
Nanamarina patanty iray ho an'i Apple izay mitondra ny Touch Bar akaiky kokoa ny kitendry ho an'ny iPad
OtterBox manavao ny tranga Symmetry Series 360 ary mifanaraka amin'ny iPad Pro 2020 izao
Ireo tovolahy ao amin'ny OtterBox dia nanavao ny tranga Symmetry Series 360 mba hifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao 2020 sy 11-inch vaovao 12,9
Ny iFixit dia nametraka ny Magic Trackpad vaovao an'i Apple ambanin'ny X-Rays ary mahavariana ny vokatra, rehefa lasa kanto ny injeniera.
Ny tetika tsara indrindra amin'ny iPad Pro Magic Keyboard
Asehonay anao ny tetika tsara indrindra hampiasana ny Magic Keyboard toy ny tena matihanina ary hahazoany tombony betsaka amin'ity fitaovana mahafinaritra ity.
Magic Keyboard for iPad Pro famerenana: manakaiky ny MacBook.
Nodinihinay ny Magic Keyboard ho an'ny iPad Pro, izay mitondra ny zavatra tsara rehetra avy amin'ny keyboard MacBook mahazatra sy ny trackpad mankany amin'ny tablette Apple.
Hita ao amin'ny YouTube ireo horonantsary voalohany amin'ny Magic Keyboard vaovao misy trackpad
Ireo horonantsary voalohany amin'ny Magic Keyboard miaraka amin'ny trackpad dia nanomboka tonga tao amin'ny YouTube izay mampiseho ny fiasa sy ny mampiavaka azy
Ny iPad Pro miaraka amin'ny teknolojia mini-LED eo amin'ny efijery dia mety hanemotra ny fandefasana azy hatramin'ny 2021, noho ny fahasarotan'ilay tontonana.
Ny Magic Keyboard vaovao ho an'ny iPad Pro dia misy ao amin'ny Apple Store izao
Ny Magic Keyboard vaovao dia azo alaina ho an'ny iPad Pro 2018 sy 2020 miaraka amina backlit keyboard sy trackpad ary koa mekanisma hety.
Ny fampiharana Anatomy feno dia hampiasa ny LiDAR an'ny iPad Pro handrefesana ny tonon-taolana
Ny fampiharana Anatomy feno dia hampiasa ny LiDAR amin'ny iPad Pro handrefesana ny tonon-taolana. Ny dokotera sy ny physios dia hanana fitaovana fandrefesana fivezivezena vaovao.
Ny fepetra fiarovana sy tsiambaratelo nataon'i Apple dia dingana iray alohan'izay sisa ambiny ary amin'ity tranga ity dia mampangina ny micro an'ny iPad Pro 2 ny T2020 Chip
Ny chip chip U1 vaovao misy ao amin'ny iPhone 11 dia toa tsy hita ao amin'ny faritra iPad Pro 2020 vaovao
Ny fandefasana ny maodely iPad Pro 2020 tsy mitovy dia tsy miaina olana amin'ny stock. Apple dia manohy miasa momba izany mba hahatongavan'izy ireo ara-potoana
Apple dia handefa anao ny iPad Pro vaovao raha nividy azy ianao talohan'ny famoahana farany
Nividy iPad Pro ve ianao talohan'ny nanambaran'ny Apple ny maodely farany indrindra? Aza matahotra fa handefa anao ny maodely farany natolotra i Apple.
Araka ny efa nampoizina, ny iPad Pro 2020 vaovao, maodely izay mampiasa saika fanodinana mitovy amin'ny iray tamin'ny 2018, dia 1% haingana kokoa.
Logitech dia manavao ny tranga Slim Folio Pro ary mandefa totozy ho an'ny iPad
Logitech dia mandefa ny tranga Slim Folio Pro ho an'ny iPad 2020 ary totozy vaovao natao hampiasaina amin'ny iPad avy amin'ny iPadOS 13.4
Ny laharana iPad Pro vaovao dia tantanana, amin'ny ankapobeny, amin'ny 6 GB RAM, amin'ny 4 GB tamin'ny taranaka teo aloha, afa-tsy ny maodely 1 TB
Ny filoha lefitra senior an'ny injeniera momba ny lozisialy Apple dia mampiseho amintsika ny sasany amin'ireo endri-javatra trackpad tsara indrindra amin'ny iPad Pro vaovao
Ny iPad Pro vaovao dia manohana ny Wi-Fi 6. iPhone 11, iPhone 11 Pro ihany ary iPad Pro izao no afaka mampiasa ity protokolona WI-FI vaovao ity.
Apple dia nanolotra, manohitra ny mety rehetra, ny laharana iPad Pro 2020 vaovao, sehatra vaovao izay ny zava-baovao indrindra dia ny fitendry miaraka amin'ny trackpad.
Apple dia manolotra ny maodely iPad Pro 2020 vaovao mivantana amin'ny tranokalany. Fakan-tsary avo lenta, LIDAR, herinaratra bebe kokoa ary kojakoja vaovao
Ny seho Mini-LED dia hanjaka amin'ny famoahana an'i Apple ho avy
Apple dia vonona amin'ny famolavolana efijery mini-LED vaovao ary mety hanana vokatra enina miaraka amin'ity karazana efijery vaovao ity
Tranga iray voalaza ho an'ny iPad Pro vaovao mampiseho maodely fakantsary fakan-tsary
Ny sarin'ilay tranga mety ho tranga vaovao ho an'ny iPad Pro 2020, dia mampiseho amintsika ny fomba hahatonga ny modely fakantsary ho lasa toradroa, toy ny an'ny iPhone 11 Pro.
Ny fanavaozana ny iPad Pro dia tsy haseho amin'ny volana martsa
Ny fanavaozana ny iPad Pro izay antenain'ny mpampiasa amin'ny volana martsa ho avy izao, dia saika hahemotra hatramin'ny septambra teo aloha indrindra.
Ny iPad Pro vaovao misy fakan-tsary 3D dia mety ho hita amin'ny volana martsa
Ny famoahana DigiTimes indray dia mampiseho ny antsipirian'ny vokatra azontsika jerena amin'ny faran'ny volana martsa, misy resaka iPad Pro vaovao miaraka amin'ny fakantsary 3D
Manomboka ny tsaho fa ho tonga amin'ny iPad Pro ihany koa ny 5G fa tsy maintsy miandry isika mandra-pahatongan'ny fahalavoana manaraka ho avy eo.
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mampihetsika ny fomba fanarenana amin'ny iPad misy Face ID anao hamerenana amin'ny laoniny ny iPad-nao
Ny mekanisma lolo izay nesorin'i Apple tamin'ny tanany tamin'ny 2016 rehefa nampiditra ny faritra MacBook vaovao ...
Mamadika iPad Pro ho MacBook touchscreen 7-port
Doqo dia mametraka antsika amin'ny alàlan'ny Kickstarter klavier ho an'ny iPad Pro 11 sy 129 santimetatra izay mamadika azy ho MacBook miaraka amin'ny efijery sy port 7
Ny patanty vaovao dia mampiseho ny fomba fanatsarana ny Apple Pencil manaraka
Patanty vaovao avy amin'ny Apple no mampiseho ny fomba fanatsarana ny Apple Pencil manaraka, miaraka amin'ny fihetsika mikasika ny fikitika vaovao hifehezana asa maro kokoa.
Ny iray amin'ireo zava-baovao avy amin'ny laharana farany an'ny iPad Pro dia hita ao amin'ny mpampitohy ...
Tranga hoditra tsara indrindra ho an'ny iPad Pro
Mitady ny raharaha hoditra tsara indrindra ho an'ny iPad Pro ianao? Mihamaro ny olona misafidy ...
Photoshop ho an'ny iPad dia havaozina araka ny fandaharam-potoana mahery setra napetraky ny Adobe
Hivoaka vetivety ny Photoshop ho an'ny iPad, saingy tsy araka ny nantenainay ...
Kely dia kely ny mandeha alohan'ny hamoahana ny Adobe Photoshop ho an'ny iPad, fa ny tombantombana kosa tsy tsara mihitsy ... Hanangana Photoshop amin'ny antsasaky ny throttle ...
Tamin'ny fanombohan'ny iPhone 11 vaovao, nanararaotra nanova ny vidiny ny orinasa monina ao Cupertino ...
Ao amin'ny Apple dia efa manana ny iPad Pro vaovao 2018 ao amin'ny faritra misy azy ireo ny vokatra namboarina sy naverina tamin'ny laoniny miaraka amin'ny vidiny ambany noho ny solosaina vaovao
Ny fakantsary telo misy 3D dia mety hahatratra ny iPad Pro
Efa manana tsaho maro momba ny mety ho fakan-tsary telo izahay ao ambadiky ny fisidinana iPad Pro sy 3D amin'ny taona ho avy
Catalyst dia manolotra tranga vaovao momba ny iPad Pro momba ny rano sy ny tetika
Catalyst dia nanolotra fonosana roa vaovao hiarovana ny iPad Pro sy ny Apple Watch Series 4 amin'ny fotoana rehetra amin'ity fahavaratra ity.
Notsapainay ny raharaha Vershiover an'i Moshi ary mpiaro iVisor AG, fiarovana tsara indrindra ho an'ny iPad Air
Te hiaro ny iPad Air-nao ve ianao? Atolotray anao ny raharaha Versacover sy ny mpiaro ny efijery Moshi iVisor, ny safidy tsara indrindra eny an-dàlana ho an'ny iPad.
BookBook ho an'ny iPad Pro, ny tranga malaza indrindra koa dia lasa niasa bebe kokoa
Izahay dia mamakafaka ny iray amin'ireo tranga malaza indrindra eny an-tsena. Roa ambin'ny folo atsimo no manavao ny tranga BookBook mba hifanaraka amin'ny iPad Pro vaovao ary hahazo tombony betsaka avy amin'izy ireo.
Samsung dia afaka manao ny fampisehoana OLED vaovao ho an'ny MacBook Pro sy iPad Pro
Ny tsaho vaovao dia miresaka momba ny iPad Pro sy MacBook Pro miaraka amin'ny efijery OLED nataon'i Samsung, nefa tsy mamaritra ny daty famotsorana
UAG dia mandefa ny tranga Scout azy hiarovana ny iPad Pro sy ny Smart Keyboard Folio
UAG dia mandefa ny tranga Scout vaovao hiarovana ny iPad Pro ao anatin'ny 360º mandritra ny fampiasana ny Smart Keyboard Folio amin'ny vidiny tena mahaliana.
Apple dia namoaka horonan-tsary vaovao telo miaraka amin'ny fampiasa iPad Pro
Horonantsary vaovao telo misy fiasa ho an'ny Apple iPad Pro no hitantsika ao amin'ny fantsona YouTube an'ny Apple Spain.
Autodesk SketchBook dia mifanaraka amin'ny iPad Pro sy Apple Pencil an'ny taranaka faharoa
Ny fampiharana Autodesk SketchBook dia navaozina mba hifanaraka amin'ny iPad Pro sy 2018nd Gen Apple Pencil 2 ary koa ny fiasa vaovao.
Logitech dia manolotra tranga vaovao momba ny keyboard ho an'ny iPad Pro 2018
Logitech dia nampiditra ny laharana Slim Folio vaovao, tranga fitendry, ho an'ny laharana iPad Pro 2018
iOS 12.2 dia hitondra ny fanampiana Logitech Crayon amin'ny iPad Pro
Ny zava-drehetra dia manondro fa ny famoahana manaraka ny iOS 12.2 dia hitondra fanohanana ho an'ny stylus Logitech Crayon ho an'ny iPad Pro manontolo.
Ity no laharana iPad 2019 aorian'ny fampisehoana ireo modely vaovao
Taorian'ny fampidirana ny laharana iPad Air sy iPad Mini vaovao, ny elanelana iPad dia manitatra amin'ny fanampiana modely vaovao ary manafoana ireo maodely taloha.
Ahoana ny fisafidianana lahatsoratra amin'ny iPad
Ny maodely samihafa an'ny iPad sy ny iOS 12 dia mamela antsika hanana fomba maro hisafidianana lahatsoratra, ary hazavainay izy rehetra mba hamerenanao fotoana.
Ampianaro ary henoy ny iPad Pro miaraka amin'ity adapter Moshi ity
Moshi dia manolotra adaptatera USB-C izay ahafahantsika mameno ny iPad Pro mandritra ny fihainoana mozika amin'ny headphones
Mampiseho amintsika i Apple fa izay rehetra azontsika atao amin'ny resaka fanovana horonantsary miaraka amin'ny iPad Pro sy ireo rindranasa mifanaraka aminy.
Adobe dia manavao ny fampiharana fampiharana roa malaza indrindra, ny Photoshop Sketch ary ny Illustrator Draw, izay mahatonga azy ireo hifanaraka amin'ny Apple Pencil 2 vaovao.
Arovy ny iPad Pro anao amin'ny Moshi iVisor sy Versacover
Notsapainay ny tranga Versacover sy ilay mpiaro ny efijery Moshi iVisor, iray amin'ireo setana tsara indrindra hiarovana ny iPad Pro 360º
iPad Pro 2018, efa manomboka ve ny vanim-potoana Post-PC?
Ny iPad Pro farany navoakan'i Apple dia natolotra fa ny tena safidy voalohany amin'ny solosaina mahazatra. Manana fahefana be dia be ianao, ahoana ny momba ilay rindrambaiko?
Ny iPad Pro dia miolakolaka kely noho ny maodely hafa, saingy miseho bebe kokoa
Manazava ny fizotry ny famokarana iPad Pro i Apple ary manandrana mitady fanamarinana ho an'ny Bendgate izay tototry ny tambajotra
Andro vitsy lasa izay dia nilaza taminay izahay ny amin'ny fomba niondrika ireo singa sasany amin'ireo maodely iPad Pro vaovao tamin'ity taona ity ...
Ny sasany iPad Pro 2017 dia misy teboka manjelanjelatra eo amin'ny efijery
Niaiky fa ny sasany amin'ireo iPad Pro 2018 dia aforitra, na dia ao anaty boaty aza, ankehitriny ...
Misy iPad Pro tonga mivalona ao anaty boaty ary fantatry ny Apple izany
Azonao atao izao ny mividy ny adapter herinaratra Apple 18W USB-C
Iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny iPad Pro vaovao amin'ity taona 2018 ity ny fiovan'ny mpampitohy an'ny ...
Ny sary haavo Console dia tonga amin'ny NBA 2K vonona amin'ny iPad Pro vaovao
Ny NBA 2K vaovao dia eto ho an'ny iPad Pro vaovao, lalao voalohany izay mitondra antsika sary konsol ho an'ny fitaovana finday Cupertino.
Apple manizingizina: ny iPad Pro mety ho solosainao manaraka
Ny iPad Pro no fitaovana fanamoriana ho an'ny Cupertino ry zalahy aorian'ny Keynote farany teo. Lasa ny iPhone hanome lalana ny takelaka vaovao Ny bandy avy ao Cupertino dia manangana toerana vaovao izay manizingizina ny fanoloana izay azon'ny iPad Pro vaovao ampiasaina amin'ny solosaina mahazatra.
Satechi dia mandefa ny USB-C Hub voalohany ho an'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny HDMI 4K, Minijack, USB-C, ary USB-A
Ny mpanamboatra kojakoja ho an'ny iDevices, Satechi, dia mialoha amin'ny alàlan'ny fandefasana USB-C Hub vaovao ho an'ny iPad Pro vaovao miaraka amina interface vaovao 4.
Adobe Lightroom dia nohavaozina manampy fanampiana ho an'ny iPad Pro, iPhone XS ary XR vaovao
Taorian'ny laza malaza ananany dia manavao ny Lightroom ho an'ny iOS i Adobe izay mahazo fanohanana amin'ny iPad Pro vaovao sy ny Apple Pencil vaovao.
Efa manana ny sary iFixit an'ny iPad Pro vaovao izahay
Vao nampiditra ny maodely iPad Pro vaovao amin'ity taona 2018 ity i Apple, ny iPad Pro 11-inch ary ...
Toy izao ny fianjeran'ny iPad Pro 2018 vaovao. Voalohany «fitsapana fitetezana»
Toy izao ny fianjeran'ny iPad Pro 2018 vaovao. "Fitsapana fitetezana" voalohany
Raha mbola tsy fantatrao ny karazana fitaovana azonao ampifandraisina amin'ny iPad Pro anao vaovao misy fifandraisana USB-C, amin'ity lahatsoratra ity dia hofongarantsika ny fisalasalanao.
Voamarina, ny iPad Pro vaovao dia mahery vaika tahaka ny 15-inch MacBook Pro
Taorian'ny andrana Geekbench voalohany natao tamin'ny iPad Pro vaovao dia voamarina ny angona: mahery kokoa noho ny solosaina finday maro eny an-tsena.
Sintomy ny rindrambaiko iPad Pro vaovao
Raha te hankafy ireo sary mivalona vaovao izay ho avy amin'ny iPad Pro ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia apetrakao eo am-pelatananao izy ireo.
Ny fampisehoana Keynote an'ny iPad Pro vaovao dia azo alaina ao amin'ny YouTube
Ny lahateny fototra ho an'ny iPad Pro, MacBook Air ary Mac Mini vaovao dia azo alaina ao amin'ny fantsona YouTube ofisialin'i Apple.
Na ny iPad Pro 11-inch na ny maodely 12,9-inch dia manolotra antsika amin'ny kinova 1 TB 6 GB RAM, 2 GB mihoatra ny ambiny amin'ireo modely aseho manana fahaiza-manao ambany.
Mieritreritra ny hividy iPad Pro vaovao? tokony handinika ny fividianana AppleCare ianao ...
Ny tovolahy avy any Cupertino dia nametraka ny vidin'ny fanamboarana ho an'ny iPads Pro vaovao, ary efa nilaza taminay izahay fa tsara kokoa ny manao fiantohana fanampiny toy ny AppleCare
New iPad Pro: Vidiny, lafin-javatra ary izay rehetra ilainao ho fantatra
Jereo miaraka aminay ny vaovao rehetra momba ny iPad Pro, ary koa ireo fiasa sy vidiny.
Ireo ny vidin'ny laharana iPad Pro 2018 vaovao
Ato ambany izahay dia mampiseho aminao ny vidin'ny taranaka vaovao an'ny iPad Pro, izay natolotr'i Apple tao New York.
Apple Pencil vaovao ary Smart Keyboard Folio vaovao
Manana iPad Pro vaovao izahay ary miaraka aminy ny peripheraly vaovao toy ny Apple Pencil vaovao sy ny keyboard Keyboard Folio Smart Smart.
Ny Apple Pencil 2 dia hanana famolavolana, fihetsika ary rafitra fikirakirana vaovao
Ny fanavaozana Apple Pencil dia iray amin'ireo vaovao honohono fa ho hitantsika rahampitso, miaraka amin'ny iPad vaovao tsy misy fefy sy Mac vaovao nohavaozina.
Amin'ny alàlan'ny kaody beta 12.1 beta, voamarina fa ny iPad Pro vaovao dia hahatratra ny tsena miaraka amin'ny teknolojia Face ID an'ny iPhone X, XS ary XS Max
Mety ho toy ny taranaka iPad Pro vaovao ity izay haseho amin'ny 30 Oktobra
Asehonay aminao ny fandikana farany navoaka momba ny mety ho endrik'ilay taranaka vaovao iPad Pro, izay havoaka amin'ny 30 Oktobra.
Ny iPad Pro manaraka dia ho avy amin'ny Face ID, USB-C, ary Apple Pencil 2 vaovao
Nambara ny tsiambaratelon'ny iPad Pro vaovao ... Ho tonga amin'ny iPads vaovao ny Face ID miaraka amin'ny USB-C izay ahafahantsika mampiasa efijery ivelany.
IPad Pro 2018 Mety ho kely kokoa ny sisin'ny bezel sy ny sisiny fisaka
Ny fandikana voalohany mifototra amin'ny fampahalalana tafaporitsaka dia nanjary mazava ary naneho iPad Pro tsy misy bokotra Home miaraka amin'ny rafitra Face ID sy ny sisiny fisaka.
Mety ho iPad Pro 2018 vaovao ity
Miseho izy ireo. Sary sy horonan-tsary vitsivitsy an'ny maodely 3D izay afaka mampiseho amintsika ny fisehoan'ny iPad Pro 2018 izay hasehon'i Apple amin'ny herinandro ambony
Tranga iray ho an'ny iPad Pro 2018 manaraka dia mamela antsika liana be
Tranga vaovao heverina ho an'ny iPad Pro izay hasehon'i Apple amin'ity volana septambra ity dia mahatonga antsika hanintona olona tsy fantatra hatramin'izao
Ny iPad Pro vaovao misy port USB C dia azo atomboka amin'ity taona ity
Ary izany ve dia ny fampitandremana ny famoahana ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny port USB C ...
Ny fivoahan'ny farany farany amin'ny beta fahadimy an'ny iOS 12 dia mampiseho hoe ho toy ny ahoana no hitantsika tsy ho ela ny interface an'ny iPad Pro tsy misy frame.
Voalohany ny boaty AirPods ary izao ny iPad tsy misy frame, tsy misy bokotra ary tsy misy notch. Ny kaody IOS 12 dia miteniteny foana
Ary aorian'ny kinovan'ny beta navoakan'i Apple, ny kaody loharano amin'ireo dia mampiseho zava-miafina lehibe ...
Ny iPad Pro vaovao dia hanaraka ny faran'ny iPhone: veloma 3,5 mm jack, hello Face ID
Apple dia mety mieritreritra ny hanova ny toeran'ny Smart Connector hatrany ambany mba hanampiana ny fampiasa ID ID amin'ny iPad Pro.
Ny utopia an'ny iPad tsy misy frame
Tsy manana ahiahy aho fa indray andro any dia hahita iPad isika izay zara raha misy rindrina eo aloha, ary ...
Jun Zhang (Rosenblatt) dia nanambara fotsiny fa afaka manana iPad Pro vaovao isika mandritra ny volana vitsivitsy amin'ny Fihaonamben'ny Mpampandrosoana Manerantany izay hotanan'i Apple ny herinandro voalohany amin'ny volana jona any San Jose.
iOS 11.3 dia mampiseho porofon'ny iPad Pro vaovao misy Face ID
Ity dia zavatra izay miharihary ho an'ny maro amintsika, saingy efa fantatra fa miaraka amin'i Apple dia tsy misy ...
Augmented Realité ary fanamarihana, fanambarana iPad Pro vaovao
Apple dia nandefa doka vaovao ho an'ny iPad Pro ao amin'ny fantsona YouTube azy. Amin'ity tranga ity, ny lohahevitra voafantina dia: Fandraisana an-tsoratra sy zava-misy mitombo
Io no fanontaniana apetrak'i Apple amin'ny fisalasalana momba ny fividianana ...
11-core A8X Bionic chip sy Face ID ho an'ny iPads 2018?
Ny tsaho momba ny maodely iPad manaraka ho an'ny 2018 dia mitohy hatrany amin'ny tambajotra ary avy eo ...
Tsy misy dikany ny fandefasana Frameless iPad Pro
Ary ankehitriny manana ny iPhone X vaovao eo ambony latabatra isika rehetra dia mieritreritra ny ambiny ...
Delta Airlines dia hanova ny Surface sy Lumia ho an'ny iPad sy iPhone
Deltra Air Lines dia nanambara fa amin'ny voalohan'ny taona ho avy, dia hosoloiny ny iPad sy iPhone ny Surface sy Lumia
Horonan-tsary Apple vaovao telo no mampiseho amintsika ny asan'ny iPad
Ny iPad dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo vokatra izay mampifanaraka bebe kokoa ny vaovao amin'ny vaovao ...
Apple dia te hanatsara ny kojakoja amin'ny Smart Connector
Apple dia manandrana mamadika an'ity toe-javatra ity amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasam-pamokarana kojakoja samihafa miaraka amin'ny fikasana hanolotra kojakoja bebe kokoa.
Mividiana iPad Pro 9,7 ″ vaovao amin'ny vidiny 579 euro
Ao anatin'ny fotoanan'ny varotra isika ary misy ivon-toeram-pivarotana sy magazay manokana natomboka amin'ny vidiny mahaliana ho an'ny ...
Iray volana lasa izay dia natomboka ireo fanambarana roa ireo saingy vao omaly vao nanangana ny orinasa ...
Ny iPad Pro dia mahavita manao asa sasany amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny MacBook Pro araky ny Benchmarks.
iFixit dia manamafy ny fahatsiarovana RAM 4GB an'ny iPad Pro 10,5-inch
Ity dia iray amin'ireo tsiambaratelo notehirizin'i Apple tamina iPad Pro 10,5-inch vaovao sy ...
Mampitahainay ny masontsivana momba ny iPad Pro 9,7 sy ny iPad Pro 10,5 santimetatra
Mitohy hatrany ny vaovao ny ampitson'iny rehefa notanterahina omaly teny amin'ny McEnery Convention Center any San Jose, ...
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny iPad Pro 10,5-inch vaovao
Ary farany, ny tsaho rehetra nanondro ny famoahana iPad Pro vaovao 10,5-inch dia voamarina.
IPad Pro vaovao
Ny iPad Pro vaovao dia manana efijery 10,5-inch ary bezela vitsy noho ny hafa. Miara-miasa daholo ny zava-drehetra mba hampiasana sy hampiasaina.
Maninona ny Surface Pro vaovao dia tsy mifanandrify amin'ny iPad
Ny nataon'i Microsoft mazava tsara dia ny Surface-ny dia tsy ho mpifaninana amin'ny iPad intsony, raha nisy izany.
Sintomy ny rindrambaiko iOS 10.3.3 vaovao natokana ho an'ny iPad Pro
Ny beta voalohany an'ny iOS 10.3.3 dia nahatonga antsika ho mpiorina farany vaovao haingon-tsary telo vaovao ho an'ny iPad Pro 12,9-inch
Apple dia manavao ny fampanantenan'ny iOS tsara kokoa amin'ny iPad
Toa tapa-kevitra ny hanatsara ny rafitra fiasan'ny iPad Pro i Apple mba hanatsara azy io. Ary afaka nanakaiky kokoa noho ny hatramin'izay isika nahita ny fahatanterahan'izany.
Apple dia namoaka doka vaovao miorina amin'ny Twitter telo ho an'ny iPad Pro
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa doka vaovao misy iPad Pro telo manaraka ity lohahevitra Twitter ity ihany
Fanambarana vitsivitsy momba ny iPad Pro farany teo izay efa misy amin'ny Espaniôla
Ny sasany amin'ireo fanambarana Apple farany momba ny iPad Pro izay hitantsika herinandro vitsivitsy lasa izay dia misy amin'ny teny Espaniôla ...
Rahoviana i Apple no hanomboka ny iPad vaovao 10,5-inch?
Ny iPad Pro 10,5-inch dia mbola velona kokoa noho ny hatramin'izay, na dia mifanipaka aza ny vinavina momba ny fotoana hanombohany
Mihidy ny Apple Store an-tserasera ary toa hahita vokatra vaovao isika anio
Na eo aza ny fahagagan'ny sasany, toa tsy nakatona ny fikarakarana Apple fa hikarakara fitaovana vaovao.
Ary ankehitriny ny tsaho dia manondro fanovana kely ho an'ny iPad Pro 2
Ary ny tsy hamelantsika ny iray izay alehantsika amin'ny iray hafa. Izay noresahintsika omaly tao amin'ny # PodcastApple ...
Ny afisy fampiroboroboana ny sarimihetsika farany an'i Hugh Jackman dia noforonin'i David Rapoza tamin'ny iPad Pro miaraka amin'ny Apple Pencil sy Procreate.
Apple dia namoaka fanambarana vaovao roa hampiroborobo ny fahafahan'ny iPad Pro
Ireo bandy avy ao Cupertino dia nanangana fanambarana vaovao roa izay manasongadina ny kalitaon'ny iPad Pro miaraka amin'ny Apple Pencil
Ny fanambarana farany iPad Pro dia manafoana ireo mpanonta
Ny fanambaràna farany momba ny iPad Pro dia te hanolotra antony vaovao hanariantsika ny PC na Mac antsika eo am-baravarankely ary handray ny iPad Pro ho fitaovana mahazatra
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny iPad Pro 10,5-inch dia milaza fa hanana vahaolana avo kokoa izy io fa mitovy ny hakitroky ny pixel.
Manomana hetsika ny orinasa amin'ny volana martsa ho avy izao, izay ahitantsika ireo maodely iPad Pro vaovao sy iPhone 7 mena manaitra naseho natolotra.
Ny tatitra farany momba ny varotra iPad dia manondro fa mianjera indraindray, azo antoka fa tsy ...
Ny fisian'ny iPad Pro 12,9 ″ dia ahena alohan'ny fanavaozana mety hisy amin'ny volana martsa
Ny fahazoana ny iPad Pro 12,9-inch dia nahena hatramin'ny fahazoana miandry hatramin'ny 3 herinandro vao handray azy.
Ny isa dia milaza fa ny iPad dia amidy tsy mihena hatrany, saingy tsy manakana azy tsy hijanona amin'ny takelaka be mpividy indrindra eny an-tsena izany.
Hanao fitsidihana mandritra ny tantaran'ny iPad izahay, iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra noforonin'i Apple, ary ireharehan'i Steve Jobs.
Ny iPad Pro 10,5 ″ dia ho toy ny iPad Mini roa napetraka mifanila
Ny 10,5 "honohono" iPad Pro dia ho toy ny minis iPad roa mipetraka eo anilany - nanao endrika matematika ny mpamorona iray, ary izao dia mifanaraka daholo
Araka ny vaovao farany, Apple dia vonona ny handefa iPad Pro vaovao amin'ny tapany voalohan'ny taona 2017. Na izany aza,…
Podcast 8 × 11: Ny iPhone sy iPad vaovao an'ny 2017
Fizarana vaovao amin'ny podcast iPhone Actualidad izay hiresahantsika ny tsaho momba ny iPhone sy iPad vaovao, ankoatry ny zavatra hafa.
Na dia mihena ny isa aza ny iPad, ny Microsoft Surface kosa dia mivarotra bebe kokoa
Nanambara i Microsoft andro vitsivitsy lasa izay ny kaonty isan-taona, izay ahafahantsika mahita ny fomba nitomboan'ny varotra Surface Pro 4
Apple dia afaka nanangana "mini" iPad Pro ary manavao ny maodely 12,9 ″
Ny tsaho farany dia milaza fa hanangana maodely iPad Pro telo vaovao i Apple amin'ny taona ho avy, ao anatin'izany ny maodely mini sy 10.1-inch.
Ny iPhone 7 Plus vaovao dia matanjaka kokoa noho ny 12.9-inch iPad Pro
Ny tsipika fampiasa voalohany amin'ny iPhone 7 Plus dia tafaporitsaka ary milaza ny valiny fa mahery kokoa noho ny 12.9-inch iPad Pro izy ity.
Te hividy iPad ve ianao? Vaovao tsara: Apple dia nampidina ny vidin'ny takelaka manan-danja indrindra.
Tranga BookBook malaza roa ambin'ny folo any atsimo dia tonga amin'ny iPad 9.7-Inch
Taorian'ny famoahana ny tranga roa ambin'ny folo BookBook South ho an'ny iPad Pro 12.9-inch dia natombok'izy ireo ny BookBook ho an'ny iPad Pro 9.7-inch vaovao.
Apple dia afaka nanangana habaka iPad 10,5 new vaovao amin'ny taona ho avy
Raha ny filazan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo, Apple dia mikasa ny hametraka modely iPad 10,5-inch vaovao eny an-tsena amin'ny taona ho avy.
Apple dia manomana iPad 10,5 new vaovao ho an'ny 2017
Naminavina i Ming-Chi Kuo fa tsy hisy iPad Pro vaovao hatramin'ny taona ho avy ary misy maodely vaovao mirefy 10,5 santimetatra.
Raha tsy te ho very ny Apple Pencil anao ianao dia ny Magnet no vahaolana
Ny tranga Magnet an'ny Apple Pencil dia mamela antsika hiaro ankoatry ny "fametahana" ny Apple Pencil amin'ny iPad Pro mba tsy hahavery azy.
Kyle Lambert dia nanambara ny fizotrany namorona ny afisy lehibe amin'ny andiany Netflix: "Stranger Things", vita amin'ny iPad Pro sy Apple Pencil.
Tonga ao amin'ny faritra voaverina ao amin'ny Apple Store an-tserasera ny iPad Pro
Ny maodely iPad Pro voalohany, ny 12,9-inch, dia nanomboka tonga tao amin'ilay faritra nohavaozina amin'ny Apple Store Online any Etazonia
Ahoana raha ny iPad Pro no solosainao tokana?
Apple dia mandefa doka vaovao manisa ny hatsaran'ny iPad Pro raha ampitahaina amin'ireo an'ny solo-sainanao ka mety ho lasa solosaintsika io.
Apple dia nanangana fanambarana vaovao momba ny iPad Pro: Inona no atao hoe solosaina?
Apple dia nanangana fanambarana vaovao momba ny iPad Pro izay tiany handresena lahatra antsika fa "ny solosaina vaovao" izy io. Hataonao resy lahatra ve izany?
Pangu Jailbreak Utility dia miasa amin'ny iPad Pro
Ny fampiasana Pangu Jailbreak dia efa miasa amin'ny iPad Pro, iPod Touch 6G ary manamboatra bug ihany koa.
IPad Pro dia mahazo 3D Touch noho ny Apple Pencil
Ny iPad Pro dia afaka mahazo fiasa 3D Touch sasany noho ny Apple Pencil, ary ao amin'ny iOS 10 dia efa misy ny famantarana azy rehefa asehonay anao amin'ity horonantsary ity
Fanavaozana ny Parallels Access miaraka amin'ny fanohanan'ny iPad Pro 12.9-inch
Parallels Access dia miaraka amin'ny fanohanana ireo vahaolana hafa amin'ny iPad's Pro sy ny fanohanana ny Apple Pencil.
Araka ny lazain'i Apple, dia vitsy dia vitsy ny iPad Pro tratry ny Error 56
Farany dia nandroso i Apple ary nanamafy ny lesoka 56, izay manome torolàlana amin'ireo mpampiasa hifandray amin'ny ivon-toeran'i Apple hamaha izany.
Tsy toy izany, Apple, tsy toy izany: iOS 9.3.2 dia mamaky iPad Pro sasany amin'ny Error 56
Ny mpampiasa sasany dia milaza fa ny iPad Pro dia toa milanja taratasy tsara taorian'ny fanavaozana ny iOS 9.3.2. Mampitandrina anao izahay!
Famerenana ny iPad Pro vaovao, ny tsara ao anaty tavoahangy kely
Ny iPad Pro 9,7-inch vaovao dia mitondra ny hery rehetra amin'ny habe mahazatra, ary miaraka amin'ny fanatsarana manan-danja amin'ny maodely teo aloha.
Jony Ive dia mamolavola iPad Pro mavo ho an'ny fotoana manokana
John Ive dia nanamboatra iPad Pro mavo izay hatao lavanty miaraka amin'ny fonony maranitra vita amin'ny hoditra frantsay manga sy Apple Pencil volamena volamena
9.7-inch iPad Pro: Fomba 12 tianao
Eto izahay dia hasehoko anao ny fiasa 12 an'ny iPad Pro 9.7 santimetatra vaovao. Ny fitaovana dia toy ny kinova kely kokoa amin'ny iPad Pro mahomby.
Apple dia nampiroborobo ny Office 365 ho fitaovana ho an'ny iPad Pro
Ny alatsinainy lasa teo dia natolotr'i Apple ny iPad Pro faharoa ao amin'ny faritra, fitaovana 9,7-inch izay misy ...
Unboxing voalohany an'ny iPad Pro 9,7-inch
Ampisehoanay anao ny iray amin'ireo unboxing voalohany an'ny iPad Pro 9,7-inch izay ahafahanao mividy azy amin'ny iPad Air 2 sy ny iPad iPad 12,9-inch
Ny processeur iPad Pro A9X 9,7-inch dia voafetra
Rehefa mandeha ny fotoana satria hanolotra ny iPhone SE vaovao sy ny iPad Pro 9,7 vaovao i Apple ...
Tsy ampirisihina hampiasa ny Smart Cover amin'ny iPad Air 2 miaraka amin'ny iPad Pro 9,7-inch
Nandritra ny fampisehoana ny iPad Pro 9,7-inch vaovao, afaka nanamarina izahay rehefa vakiana ny pitsipitsony, fa samy ...
Podcast 7 × 04: iPhone SE sy iPad Pro, satria maninona ny habe
Amin'ity fizarana ity dia jerenay ny vaovao rehetra hitanay naseho tao amin'ny campus Apple ao Cupertino andro vitsivitsy lasa izay, toy ny iPhone SE na iPad Pro
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny iPad Pro 9,7-inch
Betsaka ny vinavina momba ity fitaovana vaovao ity izay entin'i Apple amin'ny endrika iPad handaminana ...
Apple koa dia nandefa ny iTunes 12.3.3 miaraka amin'ny fanohanana ny iOS 9.3
Apple dia manohy mamoaka fanavaozana ny rindrambaiko. Aorian'ny famoahana ny iOS 9.3, tvOS 9.2, watchOS 2.2, ary OS X…
Ny iPad 9,7 ″ manaraka dia hatao hoe iPad Pro; mifanaraka amin'ny Apple Pencil
Rehefa miandry ny iPad 9,7-inch manaraka isika rehetra hantsoina hoe iPad Air 3, dia fantatsika izao fa ho Pro Pro ihany koa io.
Netflix dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana sy ny 3D Touch ho an'ny rehetra
Ny fanavaozana dia mitondra ho antsika autoplay ho an'ny mpampiasa iOS ary koa fampidirana 3D Touch.
Ny iPad Pro dia mety voasazy haingana kokoa amin'ny USB 3.0
Ny mpampitohy Lightning an'ny iPad Pro dia mifanaraka amin'ny famaritana USB 3.0 izay mamela fiampangana haingana be kokoa noho ny amin'ny telegrama ankehitriny
T-Pain dia mampiseho amintsika ny vaovaon'ny GarageBand ho an'ny iOS amin'ny horonan-tsary
Nitafy ny akanjo ivelany i T-Pain ary nandrakitra horonantsary iray izay anehoany amintsika ny vaovao farany momba ny GarageBand ho an'ny iOS.
Navaozina ny GarageBand manampy fanampiana ho an'ny 3D Touch
Ny GarageBand dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fanampiana ny 3D Touch amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus ary ny fanatsarana ny iPad Pro, izay nahatonga azy io ho tsara kokoa.